September 29, 2012 - Written by
Baardheere:-Wararka naga soo gaaraya degmada Baardheere ee Gobolka Gedo ayaa sheegaya in diyaarado laga leeyahay dalka Kenya ay duqeyn ka geysteen magaalada, duqeyntaas oo ay waxyeelo iskugu jirta dhimasho iyo dhaawac ay ka soo gaartay dad rayid ah.
Diyaaradaha ayaa waxaa ay Gantaalo ku tureen EDC-da degmada Baardheere waxaan duqeynta ku dhintay ilaa 1 qof waxaan ku dhaawacmay ilaa 3 qof oo kale oo dhamaan tood la sheegay in ay yihiin dad rayid ah. Diyaaradaha dalka Kenya ayaa waxaa kale oo duqeyn ka geysteen goobo kale oo ka baxsan gudaha magaalada gaar ahaan duleedka magaaalda iyadoo ciidanka ururka Al-shabaab oo ku sugnaa Degmada Baardheere ay ku rideen hubka lidka diyaarada.
Ururka al-shabaab ayaa weli gacanta ku haya Degmada Baardheere ee Gobolka Gedo waan goobaha ilaa hadda uu ka jiro maamul hoos taga Al-shabaab, Ilaa hadda si buuxda uma aysan shaacin laamaha caafimaadka ee Al-shabaab khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqeynta ay diyaaradaha dalka Kenya ka geysteen degmada Baardheere.
Ma ah markii ugu horaysay oo ay diyaaradaha dalka Kenya ay duqeyn ka geystaan degaano ka tirsan Gobolka Gedo iyo gobolka Jubada Hoose. Duqeymaha ay geysteen diyaaradaha Kenya ayaa waxaa ka dhashay khasaaro leh dhimasho iyo dhaawac oo soo gaarta dadka rayidka ah.